IINDIDI ZEETSHIMINI (ISIKHOKELO SOYILO) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Iindidi zeetshimini (Isikhokelo soYilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwiindidi zeetshimini kubandakanya uyilo oludumileyo, indleko, ubuhle kunye neengozi kunye neempawu.
Ukuba uhlala kwindawo enebusika, usenokuzibuza ukuba leliphi elona ndlela lifanelekileyo lokutshisa ikhaya lakho. Ngelixa indawo yokubasa umlilo ayinakuba yeyona ndlela isebenzayo yokugcina yonke indlu ifudumele xa iqondo lobushushu liqala ukuhla, lulongezo olonwabisayo kulo naliphi na igumbi.
Ukuba uphupha ngeKrisimesi emhlophe kubandakanya imibono yakho kunye nabantu obathandayo nibutha umlilo oqhekezayo, nibambe iziselo ezifudumeleyo, kwaye nimamele umculo weholide-indawo yokubasa umlilo ngokuqinisekileyo iya kuba lulongezo olufanelekileyo kwindawo yakho yokuhlala.
Ngaphambi kokuba uthathe isigqibo malunga noluphi uhlobo lomlilo olufunayo, nangona kunjalo, kuya kufuneka uqwalasele iintlobo ezahlukeneyo zeetshimini onokuzifaka.
Itshimini yinto ebalulekileyo kulo naliphi na ikhaya elinendawo yokubasa umlilo, isithando somlilo, okanye ibhoyila, ke kuya kufuneka wenze isigqibo kwitshimini ngaphambi kokuba uqale nokufaka umlilo.
Sisebenza njani itshimini?
Iindidi zoyilo lweChimney
Iinkonzo kunye neCons of Metal Chimneys
Iinkonzo kunye neengozi zeMasonry Chimneys
Iitshimini esele zenziwe ngaphambili (eyakhiwe iFektri)
Iinkonzo kunye neCons of Prefabricated Chimneys
Iindidi zeeNdlela eziCwangcisiweyo
Iitshimini ezifakwa umoya
Iitshimini ezinDonga eziBini
Iitshimini zeSitovu esivuthayo
Iinkonzo kunye neengozi zeThuni eziVuthayo zeThuni
Indawo yoMlilo Faka iitshimini
Iinkonzo kunye neengozi zeZiko lokuFaka izitshisi
Iindleko zokongeza indawo yokubasa umlilo kunye netshimini
Itshimini yinto yokwakha esetyenziselwa ukungenisa umoya. Umjelo othe nkqo okanye umbhobho odityaniswe neziko, ibhoyila, isitovu, okanye indawo yokubasa umlilo kwaye yenzelwe ukuqhuba umsi, ubushushu, kunye neegesi ezenziwe kukusebenza kwezi zinto ngaphandle kwesakhiwo.
Ngelixa itshimini iqala ngaphakathi kwisakhiwo, ihlala inyuka ize iphume kuphahla lwesakhiwo. Le ndawo ibonakalayo yetshimini ibizwa ngokuba yistimney stack.
Ngelixa amakhadi okubulisa ngeholide angabonisa ingqokelela yetshimini njengesithintelo esihle apho iSanta Clause kufuneka ithintelwe ukuze ihambise izipho, kukho injongo ebaluleke ngakumbi yokufumba itshimini. Kukuhamba kwitshimini apho umsi kunye neegesi ezivela kwindawo yakho yomlilo ekugqibeleni zikhutshelwa ngaphandle.
Itshimini elisebenza ngokufanelekileyo ligcina umsi kunye nomsi ungasasazeki ngaphakathi kwekhaya lakho ngokuzithumela ngaphandle. Itshimini isebenza ngokusebenzisa iipropathi zokuhamba komoya okanye ukuhamba komoya.
Umoya oshushu uyenyuka ngokwendalo, ngelixa umoya obandayo uyatshona. Iitshimini zisebenzisa eli thuba lomoya kwinto ebizwa ngokuba yimpembelelo yesitaki okanye isiphumo kwitshimini. Ngempembelelo yesitaki, umoya oshushu osuka eziko okanye kwindawo yomlilo, unyuka ngetshimini. Lo moya ubizwa ngokuba uyilo
Kukho iintlobo ezininzi zoyilo lweetshimini eziqhele ukufakwa namhlanje. Kuya kufuneka wenze isigqibo malunga noluphi uhlobo lwetshimini oza kukhetha ngokuxhomekeke kuhlobo lwendawo yomlilo ofuna ukuyifaka kunye nesitayile kunye noyilo lwekhaya lakho.
Ukuba ikhaya lakho linetshimini yesinyithi, oko kuthetha nje ukuba ishiminali shaft kunye nesitaki zenziwe ngentsimbi, zihlala ziyintsimbi.
Iitshimini zentsimbi lukhetho olukhulu phantse kulo naliphi na ikhaya njengoko ziya kuncoma phantse nasiphi na isitayile yoyilo. Zihlala zihamba kuye nakowuphi na umzobi oyila ikhaya kwishishini okanye kwiindlela zangoku.
Iitshimini zentsimbi zinokuguquguquka; ungazifaka kwizakhiwo ezibiyelwe ngodonga kabini okanye kathathu. Qiniseka nje ukuba udonga oluhamba ngetshimini yakho lugqityiwe. Kwakhona, ukuba ufaka itshimini yesinyithi eludongeni oluphindwe kathathu, qiniseka ukuba kukho ukuhamba komoya phakathi kwamanqanaba.
Esona sizathu siphambili sokwanda kokuthandwa kweitshimini zesinyithi kukuqina kwazo. Iitshimini zentsimbi azizukubola okanye umhlwa ngokulula kwaye ziyanyangeka kukungonakali. Isinyithi ikwangumqhubi ofanelekileyo wobushushu, owenza ukuba ibe yinto elungileyo kwitshimini.
Icala elinye elisezantsi kwiitshinali zesinyithi lelo linokufakwa kuphela kwii-angles ze-15 kunye ne-30-degree. Kwakhona, abanye abantu abayithandi imbonakalo yetshimini yentsimbi engenanto.
Ngelixa iitshimini zesinyithi zinokupeyintwa ngemibala enomtsalane okanye zifakelwe umphezulu wokuhombisa, indlela ekhethwayo yokwenza itshimini yesinyithi ibenomtsalane ngakumbi kukuyijikeleza ngobugcisa bokhuni, ngomthi, okanye nangaphezulu.
Ityhefu yokubumba ihlala icingwa njengesiqhelo okanye itshimini yesiko. Luhlobo oluqhelekileyo lwetshimini elisetyenziswa emakhaya nasezindlwini zokuhlala.
Ukuba awuzange ulibone itshimini ebomini bokwenyani, ubone nje imifanekiso okanye imizekeliso, amathuba okuba ezi ziitshimini ozibonileyo. Zihlala zenziwe ngezitena, iibhloko, okanye amatye afakwe komnye komnye kwaye agcinwe kunye ngesamente okanye ngodaka.
Enye yeenzuzo zetshimini yokwakha kukuba izitena ezenza ezi ntlobo zeetshimini zihlala zineempawu zobushushu. Oku kuluncedo ngakumbi kwiinyanga zobusika njengoko ubushushu obufunxwe zizitena buya kuphinda bususwe kwigumbi. Oku kongeza isiphumo sokufudumeza kwindawo yakho yomlilo okanye eziko.
Izitshisi zamatye nazo zithathwa njengezithandekayo kwaye zinomtsalane, ke ukuba nesitayile esihle sokwakha esincamathele eluphahleni lwakho kuhlala kusongeza kwisibheno sobuhle bendlu yakho kwaye siyakwandisa ixabiso laso lokuthengisa kwakhona.
Enye into engeyiyo kwitshimini yokwakha nangona kunjalo, ngenxa yezinto ezenziwe ngazo, zinokuba nzima kakhulu. Iitshimini zokwakha eziqhelekileyo ziya kuba sibhozo zijikeleze iitoni ezi-6 ukuya kwezi-7 kwaye zinokubeka ubunzima kwisiseko sekhaya lakho.
Kuya kufuneka uqiniseke ukuba wakha isiseko esomeleleyo nesomeleleyo kwitshimini yakho yokwakha kwaye oko kunganyusa iindleko zokwakha zendlu yakho.
Amakhaya amaninzi exesha langoku, ukuba anendawo yokubasa umlilo okanye eziko kwaye afuna itshimini, anetshimini esele ikhethiwe.
Iitshimini eyenziwe kwangaphambili yenziwe kumzi-mveliso, ihlala yenziwe ngolunye uhlobo lwesinyithi. Abavelisi betshimini abenziwe kwangaphambili banikezela ngeetshimini ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo kunye nobukhulu, kuya kufuneka ukhethe efanelekileyo kwikhaya lakho.
Nje ukuba ukhethe ukuba yeyiphi na ityhefu osele uyikhethile, umenzi uya kukuzisa itshimini kwiindawo ezininzi; ezi ke zihlanganisiwe okanye zifakwe kwisiza ekhayeni lakho.
Njengoko besesitshilo, iitshimini esele zenziwe zaza zavela kuyilo olwahlukeneyo. Oku kuthetha ukuba kuya kubakho i-chimney ye-prefab ngokuqinisekileyo enokukulingana noyilo lwekhaya ngokubanzi.
caphula ukuthetha kwintombazana
Ukufakwa kwitshimini esele ikhethwe nako kukwabiza kancinci kunokwakha ubuchwephesha okanye ngetsimbi. Kukwakhawuleze ukufakela itshimini ebanzi kunokuba uyakhe.
Kufuneka kuqatshelwe, nangona kunjalo, ukuba iitshimini esele zenziwe zihlala zingomelelanga kangako kuneetoni kunye neetshimini zentsimbi. Kananjalo abanakho ukumelana nobushushu obuphezulu, ke kuya kufuneka ujonge rhoqo itshimini yakho kwaye mhlawumbi ulungise okanye ubeke amanye amacandelo.
Ngokubanzi kukho iindidi ezine zeetshimini ezikhethiweyo. Ezi zinto zigqunywe ngumoya, umoya opholileyo, indibaniselwano kunye neetshimini ezibiyelwe ngodonga kabini. Kuya kufuneka uyazi umahluko phakathi kweentlobo njengoko ziya kukunceda uthathe isigqibo sokuba yeyiphi eya kukusebenzela kakuhle.
Umphunga ofakwe ngumoya womoya wenzelwe ukunciphisa ukuhamba komoya kwitshimini ngokubambisa umoya phakathi kweentsimbi zawo. Ngenxa yokuba umoya ovuthayo awupheli, usebenza njenge-insulator.
Uncedo kwezi ntlobo zitshimini kukunyuka kobushushu. Kuba umoya oshushu uvaleleke ngaphakathi kweendonga zetshimini, ivumela ubushushu ukuba buphindaphinde buphume kwitshimini nakwigumbi.
Ityhefu efakwe ngumoya ibiza kakhulu kwaye kunzima ukuyifaka kunezinye iitshimini esele zikhethiwe kodwa lukhetho olufanelekileyo kumakhaya akwiindawo ezibandayo kakhulu. Bangakwazi ukumelana nokubanda okungcono kunezinye iintlobo zeetshimini kwaye baya kuhlala ixesha elide.
Itshimini epholileyo yomoya ineendlela ezininzi zesinyithi kunye nesithuba esithile phakathi ukuvumela ukuhamba komoya. Iyafana neetshimini ezifakwe ngumoya ngaloo ndlela, kodwa umahluko kukuba itshimini epholileyo emoyeni ayiwubambi umoya.
Ngenxa yokuba itshimini yenzelwe ukukhupha umoya oshushu, ubushushu obuvela kwitshimini buyachithwa, oko kukhokelela kwisiphumo sokupholisa kancinane. Ngenxa yale nto, akukhuthazwa ngokwenene ukufakelwa kwiindawo ezinokubanda kakhulu.
Esinye isizathu sokuphepha i-chimney epholileyo yomoya ukuba ubusika bunzima kakhulu kwindawo yakho, kuba ukubanda kakhulu kunokubangela ukuba ungene ngaphakathi ngaphakathi kweesinyithi ezinokuthi zonakalise itshimini yakho kwangaphambi kwexesha.
Ukudibanisa itshimini sisitshisi esenziwe kwangaphambili esidibanisa izinto ezininzi kwezinye iintlobo zetshimini. Umzekelo, abanye abavelisi betshimini banikezela ngetshimini epholisa umoya kunye nokufaka umoya.
Iindidi zokudibanisa iitshimini onokuzifumana zihlala zixhomekeke kumenzi, ke qiniseka ukuba ujonge kakhulu kwikhathalogu yabo ukufumana itshimini eya kulungela iimfuno zakho kwaye iya kuma kakuhle kwiimeko zemozulu apho uhlala khona.
Itshimini enedonga eliphindiweyo ikwabizwa ngokuba yitshimini engene ngobuninzi. Yenziwe ngamacwecwe aphindwe kabini esinyithi, ihlala ingenazintsimbi, kunye nocingo lokugquma.
Ngokwesiqhelo, ezi chimney zibukeka njengesilinda yentsimbi ngaphakathi kwesilinda enkulu yentsimbi kunye nesithuba esiphakathi kokupakishwa ngokugquma. Ukuba ne-insulation phakathi kwamanqanaba amabini esinyithi kunciphisa inani lobushushu obutshintshisanayo.
tshintsha igama kwilayisensi yokuqhuba ny
Ukuba ufuna ukuba nesitovu esivuthayo somthi njengomthombo wobushushu, kuya kufuneka uqiniseke ukuba usidibanisa netshimini efanelekileyo yokubasa iinkuni.
Iindlela ezininzi zokutshisa izitovu zinokudityaniswa ngokulula kwiitshimini ezikhoyo. Izitovu ezivuthayo zomthi zinokudityaniswa kwiitshini zetsimbi kunye nezobugcisa. Uninzi lwabenzi betshimini abaphambili baya kubonelela ngetshimini eya kusebenza ngesitovu esivuthayo.
Izitovu ezivuthayo zeenkuni ziza nombhobho wesitovu onokuthi uqhoboshele kwitshimini oya kuthi uthwale umsi ovela emzimbeni wesitovu uphume uye kwisitampu seshimini.
Isitovu esivuthayo somthi siqhotyoshelwe ngokulula kwitshimini esele ikho, ke ngoko ukufakela isitovu somthi kulula kwaye kubiza ixabiso eliphantsi kunokwakha okanye ukufaka indawo yokubasa umlilo. Kusebenza ngokufanelekileyo ukufudumeza igumbi.
Ngaphambi kokufaka isitovu somlilo kunye netshimini, nangona kunjalo, kuya kufuneka uqiniseke ukuba unalo igumbi layo. Kuya kufuneka ukuba ugcine isithuba simahla kufutshane nesitovu njengoko ubushushu obuphuma kuso bunokonakalisa udonga kunye nomgangatho wokhuni.
Indawo yokubasa umlilo yitshimini eyenzelwe ukuba isetyenziswe kwindawo yokufaka umlilo.
Indawo yokufaka umlilo yindawo ekhethekileyo yesitovu seenkuni esenzelwe ukuba silingane neziko lomlilo esele likho. Olu hlobo lwesitovu emva koko kufuneka luqhagamshelwe ukuze ukuhamba komsi kunye neegesi zijolise kwitshimini yokwakha.
Indawo yokufaka umlilo itshimini edibanisa isitovu sokufaka umlilo ngokusebenzisa inkqubo ye-liner efakwe kwitshimini ekhoyo yokwakha eyakha unxibelelwano oluya kuvumela umsi kunye negesi ukuba iphambukiswe ngaphandle kwegumbi ikhutshelwe ngaphandle kwesakhiwo.
Inzuzo yendawo yokufaka umlilo kunye ne-fireplace insert chimney isebenzisa izibonelelo ezikhoyo ngoko kulula ukuyifaka. Ludibaniso oluhle nolonwabisayo kulo naliphi na igumbi.
Inkathalo kufuneka ithathiwe, nangona kunjalo, ukuba unxibelelwano lwenziwe kakuhle, kungenjalo umsi kunye nerhasi zinokuvuza zize zitshabalalise indawo ezingqongileyo.
Iindleko zokongeza indawo yokubasa umlilo kunye netshimini ngaphezulu kwekhaya lakho ziya kuxhomekeka ikakhulu kuhlobo lwendawo yomlilo kunye netshimini ogqiba ukuyifaka.
Indawo yokubasa eyakhiwe ngamatye iya kukuxabisa malunga ne- $ 7,500 ukuya kwi-15,000 yeedola ukwakha, kubandakanya abasebenzi kunye nezixhobo. Indawo yokubasa izitena, kwelinye icala iyakubiza malunga ne- $ 5,500 ukuya kwi- $ 11,000 ukwakha.
Ukwakha itshimini kuya kongeza kwiindleko zizonke zokwakha indawo yokubasa umlilo. Ixabiso eliphakathi lokufaka itshimini entsha liya kuba malunga nama-4,000 eedola ukuya kuma-8,000.
Iindleko zokugqibela zetshimini ziya kuxhomekeka kuhlobo lweetshimini ogqiba kuzo kunye nobungakanani obuzakuwufuna.
• Itshimini yentsimbi $ 75-100 ngeenyawo
• Iitshimini zamatye $ 120-240 ngeenyawo
• Iitshimini ebethelelwe kwangaphambili eyi- $ 85-150 ngeenyawo
o Utyikitye umoya i $ 85 -100 ngeenyawo
o I-Air-cooled $ 100-130 ngeenyawo.
o Ukudityaniswa kwe- $ 120-150 ngeenyawo
o Iibhanti ezibiyelweyo ezingama-90-100 ngeenyawo
• Itshimini leSitovu esivuthayo sokhuni $ 175-350 ngeenyawo
• Faka iFireplace Fireplace $ 100-200 ngeenyawo
Amaxabiso okwakhiwa kwitshimini esiwacaphule ngentla apha aquka abasebenzi kunye nezinto zokwakha. Ayizukubandakanya nayiphi na into eyongezelelweyo efana neekepusi zokuhombisa, ukugqiba, okanye iimeko.
Zeziphi iintlobo ozithandayo zeetshimini? Sazise kwicandelo lamagqabaza. Ukufumana umxholo onxulumene noko utyelele inqaku lethu malunga igesi vs indawo zombane .
amakhitshi amnyama namhlophe
Iinwele zeenwele ezimfutshane zemitshato
Imitshato yokungena engabizi kakhulu e-us
Ingoma kamama kunye nonyana wokudanisa
Isikhumbuzo somtshato wesine somyeni